ओमकार टाइम्स प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै उर्लियो विशाल , के अब प्रधानमन्त्रीले राजीनामा देलान् त? – OMKARTIMES
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै उर्लियो विशाल , के अब प्रधानमन्त्रीले राजीनामा देलान् त?
एजेन्सी । युरोपेली देश चेक रिपब्लिकमा प्रधानमन्त्री आन्ड्रेज बाबिसको राजीनामा माग गर्दै विशाल प्रदर्शन भएको छ ।
‘मिलियन मोमेन्ट्स अफ डेमोक्रेसी ग्रुप’ ले आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको र राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री बाबिसको राजीनामा माग गर्दै विशाल प्रदर्शन गरेको हो । राजधानी प्रागमा विशाल प्रदर्शन भएको छ ।
प्रदर्शनकारीहरुले आपराधिक गतिविधिमा संलग्न र राष्ट्रघातको आरोप लागेका व्यक्ति पदमा बस्न नहुने भन्दै राजीनामा माग गरेका हुन् । चेक रिपब्लिकमा भएको प्रदर्शन सन् १९८९ पछिकै ठूलो भएको अन्तर्रा्ष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री बाबिसमाथि युरोपियन युनियनले दिएको २ मिलियन युरो अनुदान हिनामिना गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ । उनले सो रकम आफू सत्तामा आउनु अघि सन् २०१७ मा दुइवटा कोषमा ट्रान्सफर गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले भने आफूमाथिको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।